महानगर खेलकुद सदस्य सचिवमा खड्का - Kheladi News Kheladi News
विद्यालयमा हक्की प्रवद्र्धन गर्न स्टिक र बल हस्तान्तरण
टीबक्स, बंकर तयार, ग्रीन बनाउन बाँकी
प्रथम गण्डकी प्रदेशस्तरीय व्याडमिन्टनको उपाधि दिलाशा र क्षितिजलाई
छैटौं पोखरा स्पोर्टस अवार्डको मनोनयन सार्वजनिक
महानगर खेलकुद सदस्य सचिवमा खड्का
असार ९ गते २०७८ मा प्रकाशित
खड्का महानगर खेलकुद सदस्य सचिव
पोखरा-पोखरा महानगरपालिका खेलकुद विकास समितिको सदस्य सचिवमा सुवास खड्कालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ । महानगरपालिकाको ५० औं नगर कार्यपालिकाको बैठकले खड्कालाई सदस्य सचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । खड्कालाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गर्न महानगर खेलकुद विकास समितिका अध्यक्षको सिफारिसलाई कार्यपालिकाको बैठकले अनुमोदन गरेको हो । प्रदेश, जिल्लामा कार्यसमिति चयन भईसकेको अवस्थामा महानगरपालिकाले पनि समितिको अध्यक्षमा दिपकबहादुर गोदारलाई नियुक्त गरिसकेको छ । यद्यपी कार्यसमितिले भने पूर्णता पाउन सकेको छैन् । सदस्य सचिवको नियुक्तपछि कार्यसमितिले पूर्णता पाउने विश्वास छ ।
लामो समय खेलकुद क्षेत्रमा होमिएका पोखरा–३२ खोलाछेउ निवासी खड्का आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता(नेपालगन्ज)मा कराँतेका प्रशिक्षक समेत हुन् । उनको खेल क्षेत्रमा प्रवेश भने दुई दशकअघि हो । २०६१ सालदेखि खेलकुद क्षेत्रमा होमिए । क्योकुशिन कराँते मार्फत उनले आफनो खेलकुदको करियर शुरु गरेका हुन् ।
पाँचौं राष्ट्रिय खेलकुद २०६५ (धनगढी) प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएका थिए । कास्की जिल्ला र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय प्रतियोगितामा प्रथम हुदैं राष्ट्रियमा छनोट भएका थिए । पोखरामा आयोजित दशौं माछापुच्छ«े कप कराँते च्याम्पियनसिपमा प्रथम तथा उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए । कराँतेका उनी आफैंमा राष्ट्रिय निर्णायक समेत हुन् ।
कराँतेमा उनले २०६५ सालमै ब्ल्याक बेल्ट फस्ट डान लिएका थिए । भारतको महामाया स्टेडियम गाजियावादमा आयोजित दशौं अन्तराष्ट्रिय कराँते प्रतियोगितामा उनी दोस्रो स्थानमा रहे । बि. स २०६६ साल देखि क्योकुशिन –फुलकण्ट्याक्ट कराते, मुआथाईको स्वयमसेवी प्रशिक्षकका रुपमा संलग्न छन् । बि.स. २०७२ सालदेयिख बिश्वको लोकप्रिय खेल रग्वीलाई कास्की जिल्लामा सुरुवात गरी प्रशिक्षण गराउन शुरु गरेका थिए ।
अंग्रेजी विषयमा स्नतकोत्तर गरेका खड्काकै प्रशिक्षकत्वमा नेपालगन्जमा आयोजित आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत कराँतेमा गण्डकी प्रदेश च्याम्पियन बनेको थियो । दुई वर्ष अघि मात्रै उनले क्योकुशिन कान कराँते इन्टरनेशनल होन्बु(जापान)बाट ब्ल्याक बेल्ट थर्ड डान लिएका थिए ।
स्पोर्टस साईन्स एकेडेमी अफ नेपाल, पोखराबाट २०७२ सालमै उनले आधारभूत कण्डिसनिङ तालिम लिए । क्योकुशिन बुदोकाइर्ए कराँते तथा किक बक्सिङको रेफ्री सेमिनारमा सहभागि भएका थिए । २०७२ साल सायनमा उनले रग्बी खेलको लेभल–१ कोचिङ तथा म्याच अफिसियलको तालिम समेत लिएका छन् ।
तेश्रो नेपाल ईस्पोर्टस् च्याम्पियनसिप अर्को साता
श्रृष्टि, शाहिल र दर्शिल उदियमान खेलाडीको मनोनयनमा
इण्डोर टि(१० क्रिकेट शुरु
आर्मीलाई दोस्रो पटक मकवानपुर गोल्डकप
हेटौंडा -नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लबले वर्षको पहिलो उपाधि हेटौडामा उचालेको छ । आर्मीले हेटौडामा उपाधिलाई दोहोर्यायो । हेटौंडाको मैदान त्रिभुवन आर्मीलाई फापेको छ । हेटौंडा–५ को पिप्ले रंगशालामा सोमबार सम्पन्न चौथो संस्करणको स्थानीय तह शहीद स्मृति अन्तर्राष्ट्रिय… पुरा पढाै
गोल्डकपको छिनोफानो आज
सडनडेथमा आर्मी फाईनल पुग्दा भ्रमणटोलीको बिदाई
हेमजा गोल्डकपलाई नेपाल आईसको प्रायोजन
गोल्डकपको समीफाइनल समीकरण पूरा
पुलिस अन्तिम चारमा
पोखरा-‘छैटौं पोखरा स्पोर्टस् अवार्ड २०७८’ यहीं असार १८ गते पोखरा सभागृह हलमा हुने निश्चित भएपछि अवार्डको रौनक बढ्न थालेको छ । खेल क्षेत्रमा अगाडि बढेका खेलाडी, प्रशिक्षक, खेलसंघ र खेल पत्रकारलाई अवार्ड प्रदान गरेर खेल क्षेत्रमा थप क्रियाशिल… पुरा पढाै
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा प्रदेश सरकारको सहकार्य
पोखरामा यु-१९ राष्ट्रिय महिला टोलीको बन्द प्रशिक्षण
यु–१९ मा एउटै विद्यालयका ८ जना क्रिकेटर